Tea any Sri Lanka ~ Journey-Assist - Faritra. Isan-karazany. Species. tsiro
Pejy fandraisana » Sri Lanka » Asia » Eran-tany / Faritra » Tea any Sri Lanka
Tea any Sri Lanka (Teaey Ceylon)
15 Desambra, 2019
14 ny fanehoan-kevitra
Mampiseho ny dite ao Sri Lanka
Eto amin'ity firenena ity dia misy faritra 7 lehibe hampitomboana dite. Eo amin'ny haavo samy hafa sy ao amin'ny faritra climatic samy hafa izy ireo. Ka ny faritra tsirairay dia manana ny mampiavaka azy manokana, izay mampiavaka azy amin'ny hafa.
Ny toe-piainana samihafa amin'ny tontolo iainana dia mitarika amin'ny fananganana fananana tsy manam-paharoa sy ny tsiron'ny dite, izay mampiavaka ny faritra iray fotsiny.
Faritra lehibe any Tea any Sri Lanka
Faritra Tea eto Sri Lanka
Nuwara Eliya (Nuwara eliya)
Karazan-dite vita any Sri Lanka
Ahoana ny fanamboarana dite? Fandehanana feno
Mahaliana momba ny dite
Inona ny marika dite manoro hevitra izahay hividy any Sri Lanka
Tea "FOR OWN" any Sri Lanka. Tsy lafo, avo lenta dite!
Hevitra. Comments. Tips
Ity faritra ity dia mibodo ny ampahany afovoan'i Sri Lanka. Mitombo ny dite eto an-toerana. Ny ampahany lehibe amin'ny fambolena Kandy dia hita ao amin'ireo lohasaha. Ny rivotra any dia somary malemy. Noho izany antony izany, ny dite maniry ao amin'ireo lohasaha ireo dia mifangaro kokoa amin'ny fanajana ny dite avy any amin'ny faritr'i Sri Lankan hafa.
Endri-javatra iray ao amin'ny faritra Kandy dia karazana fisoloana karazana karazana amin'ny manda. Indrindra indrindra, amin'ireo voly fambolena eo ambany, ny dite misy ravina lehibe kokoa dia mamboly, izay ahitana zava-pisotro be dia be, ary eo amin'ny fambolena avo kokoa, dia mitombo ny ravina kely kely kokoa, izay manome tsirony kokoa.
Ny dite avy eo an-toerana dia misy ny alpine. Ny fambolena any amin'ity faritra ity dia hita amin'ny haavon'ny 1250 m. Ny etona avo sy ny zavona matevina dia nijoro teto nandritra ny enim-bolana mahery, ary tondra-drano ny fambolena amin'ny orana manomboka amin'ny volana Mey sy mifarana amin'ny volana septambra.
Mandritra izany fotoana izany, ny rivotra mangatsiaka sy maina izay mandeha eto amin'ny vanim-potoana andrefan'ny dite mafana dia manentana tsara ny kalitaon'ny dite ao Dimbul. Manomboka amin'ny volana Janoary ity ary mifarana amin'ny fiandohan'ny volana aprily. Ny tsatoka tsara indrindra amin'ny fambolena Dimbula dia vokarina mandritra ity vanim-potoana manokana ity. Mitombo tsimoramora eto ny kirihitra dite tiana, kely ny raviny eo amin'ny habeny. Vokatry ny fahasarotana ny fanampiana vonjy taitra Dimbula dia ireo karazana mikrôklôma izay mandray anjara amin'ny famokarana dite avo lenta ary mamaritra ny fahasamihafan'ny tsirony.
Ruhuna dia iray amin'ireo faritra roa (miaraka amin'i Sabaragamuva) faritra amin'ny famokarana dite ao Sri Lanka. Ireo faritany roa ireo dia manodidina ny 60% ny dite rehetra vokarina eto amin'ity firenena ity. Ao Ruhuna, ny dite dia voasokajy ho ambany.
Ny toeram-pambolena eo an-toerana dia mipetraka amin'ny haavony hatramin'ny 600 m. Ny lafiny mampiavaka ny tany no mamaritra ny fitomboan'ny zavamaniry dite. Ny ravina eo amin'ireo kirihitrin 'ny dite eto dia lava sy tsara tarehy. Lasa mainty mainty izy ireo rehefa manamboatra.
Sabaragamuva no lehibe indrindra amin'ny faritry ny tehin'i Sri Lankan. Ny fambolena dia any amin'ny haavon'ny hahatratra 800 m.
Haingana ny fitomboan'ireo bushes ny dite eto. Manana takelaka lava izy ireo, izay, rehefa malazo, dia mahazo loko mainty marevaka ary marefo mora foana. Avy amin'ireo ravina nangonina nandritra ny vanin-taona maina dia nahazo fantsom-boasary mavo misy volondasy mena manjelanjelatra izy ireo, mamirapiratra rehefa atsangana ambony kokoa. Ny dite avy eo an-toerana dia manana tsiro marevaka, saingy tsy dia henjana ilay fofony ary manana fatran'ny caramel hue.
Ity no faritra tiana indrindra ao Sri Lanka. Any amin'ny haavon'ny haavo avo indrindra no hita any amin'ireo faritra dite avy amin'ity firenena ity.
Noir Eliya dia nibodo ny faritra afovoan-tanàna. Misy vanim-potoana roa miaraka amin'ity faritra ity - andrefany sy atsinanana, ary ny fahasamihafana eo amin'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny zavamaniry samihafa. Ny dite avy amin'i Nuwara Eliya dia manana tsiro voadio tsy fahita firy, izay tsy mitovy amin'ny tsirony dite avy amin'ny faritra hafa. Noho ny toerana avo sy ny hafanana ambany mandritra ny taona, ny hazo dite eto dia miroborobo miadana kely ary misy ravina kely izay mahazo orona volomboasary vokatry ny halazo.
Uda poussellava (Uda Pusselawa)
Ity faritra ity dia malaza ho an'ny faritra kely misy azy ary ny hakitroky ny mponina. Ny ankabeazan'ny mponina eto dia manao fambolena dite.
Matetika ny dite eto an-toerana dia matetika ampitahaina amin'ilay nipoitra tany Nuwara Eliya, fa ny dite avy any Uda Pousselava dia manana alokaloka somary maizina amin'ny kaopy. Mandritra ny vanin-andro atsinanana, izay manomboka amin'ny volana jona ary mifarana amin'ny volana septambra, ny dite tsara indrindra amin'ny taona dia amboarina amin'ny Uda Pousselava. Amin'ny faran'ny vanin-andro atsinanana, manomboka ny andrefana, izay mamaritra ny toetrandro sy ny maina. Manome fanamarihana mavokely ho an'ny hanitra dite izy.
Io no faritra tiana lavitra indrindra avy any Colombo any Sri Lanka. Ny Uva koa dia ambany ny mponina ao.
Ny tiana nambolena teto dia manana tsiro manokana izay ankasitrahana manerana an'izao tontolo izao. Ny ravin'ny dite nambolena tany Uva, noho ny fanamainana, dia mahazo loko mainty. Karazana dite maro no mamboly ao Uva, ao anatin'izany dia misy masirasira misy masirasira sy masirasira kely. Noho ny havoana rakotra haizin-drivotra sy ny vokatry ny rivotra izay mamofona an'i Uva, ny dite avy any an-toerana dia manana tsiro tokana izay ankafizin'ireo manampahaizana tena izy sy ireo mpitia dite mahazatra.
Pekoe - manana ny fisehon'ny ravinkazo manambana izay manome dite malemy amin'ny tsiro malefaka.
Orange Pekoe - ravina sy ravina maina manome tsiro malefaka.
Pek1 Rosiana 1
BP1 Broken Pekoe 1 - dite amin'ny endriky ny granules, asiana fahitana sy endrika boribory. Manome dite mahery izy ireo, ka ny tsiro no tena manambara azy.
PF1 Pekoe Fikorisana 1 - amin'ny endrika endry izany dia manolotra dite mahery. Amidy ao anaty kitapo.
BOP1 Voasarotra Pekoe 1
BOP1 Broken Orange Pekoe 1 - dia toa ravinkazo tapaka, maniry eo amin'ny lemaka ary manome fofona maivana.
BOPF Voaroaka Orona Pekoe Fannings
BOPF Broken Orange Pekoe Fannings - amin'ny endriny kely misy ravina kely kokoa. Andeha mankany amin'ny havoana. Matanjaka kokoa noho ny BOP izany.
FBOPF Eks. Sp Flowery Broken Orange Pekoe bokotra fangarenana manokana
FBOPF Eks. Sp Flowery Broken Orange Pekoe Fannings Extra Special - dia manana ny endriky ny takelaka matevina miaraka amin'ny "toro-hevitra" marobe. Misy tsiro malefaka sy fofona manitra fofona malefaka.
FBOPF1 Feno sary voninkazo matotra misy ny Pekoe
FBOPF1 Famoronan-javamaniry Pejy Volom-bary mavokely Pejy 1 - maniry eo amin'ny lemaka, manana ravinkazo antonony, matanjaka ny tsiro ary somary mamy.
Hovitra - amin'ny endrika "crumb". Miorina amin'ny trano mimanda. Mety amin'ny fampiasana ara-barotra.
Torohevitra volafotsy voafantina zana-javamaniry fambolena dite, izay lasa volafotsy velvety noho ny maina. Manana tsiro voadio sy hanitra mahafinaritra tokoa izy.
Gun Powder dia dite maitso, izay vita amin'ny fototry ny fomba manokana amin'ny fikajiana ao anaty lapoaly sinoa manokana. Ny saro-bidy amin'ny tsiro malefaka indrindra.
1. Fangaro amin'ny Tea Tea
Any Sri Lanka, ny fanamafisana ny fampiasana mpiasa an-tanana amin'ny fanangonana ravina dite dia tsara homarihina. Amin'ny fomba mahazatra, amin'ity firenena ity, dia heverina ho asan'ny vehivavy.
Ny fijinjana ny Tea tea any Sri Lanka
Ny vehivavy mandeha eo anelanelan'ny laharana misy tsaramaky ny dite, ary manangona ravina tanora tanora.
Ny toetrandro any Sri Lanka dia ahafahanao manangona ny takelaka isaky ny 7-10 andro mandritra ny vanim-potoanan'ny kalandrie.
Ny fiankinan-doha amin'ny karazana ny dite amin'ny ravina dite
Tokony ho fantatrao fa manangona amin'ny endriny isan-karazany ny ravina dite. Voangona, ny ravina manify vita amin'ny manja ambony indrindra dia angonina. Ny tsipika faharoa sy fahatelo. Ary mampisaraka ny ravina eo ambanin'ny fahatelo.
Karazana dite telo sy ny tanjon'izy ireo:
Lasa ny zandriny. Volatra, marevaka. Ny karazan-dite lafo indrindra lafo vidy no namboarina avy amin'izy ireo. (Dite fotsy)
Ny ravina afovoany (faharoa sy fahatelo avy any ambony) dia mankany amin'ny tiana mainty sy maintso mahazatra. Eo ihany koa ny haondrana.
Ireo ravina ambany noho ny fahatelo no mandeha amin'ny famokarana dite ambany. Ary koa, matetika dia atsofoka ao anaty vovoka kitapo dite
2. Ny dingana entin'ny maina
Aorian'ny fanangonana ireo ravina dia alefa any amin'ny orinasa, izay ametrahana azy ireo eo amin'ny rihana ambony ao amin'ny efitrano manokana izay ahafahan'ny rivotra mivezivezy malalaka eo anelanelan'ireo ravina.
Amin'ny fotoanan'ny orana, miaraka amin'ny hamandoana be dia be, amin'ny vanim-potoanan'ny fanalefahana, ny mpanainga mpankafy indostria dia ampiasaina fanampiny.
Maharitra hatramin'ny 10 ora ny fanamandoana.
3. ravina dite manelingelina
Aorian'ny dingana maina, ny ravina dia ampidirina amin'ny milina manokana izay mamono curling ny takelaka. Amin'io dingana io, ny fiantraikany lehibe amin'ny ravina dite amin'ny haavon'ny cellular. Ny angovo sy ny ranom-boasary izay manome ny hanitra mampiavaka ny dite.
4. Fihazanana. fermentation
Aorian'ny fametahana milina, ny ravina dite dia napetraka amin'ny talantalana manokana na ao anaty sarina mesh, ao anaty efitrano misy rivotra mangatsiaka sy mando. Ao, ao anatin'ny adiny telo, noho ny fihenan'ny oksizenina, ny ravina dia manova ny lokony amin'ny volontany maizina (oxidize). Io dingana io dia antsoina hoe fermentation.
5. Ny dingana mamafa ny ravin-dite
Aorian'ny fitrandrahana, ny ravina dite dia mandalo tsikelikely amin'ny efitrano misy rivotra mafana, ary avy eo maina.
Amin'ity sehatra ity, raha vao maitso ny ravina maintso, dia efa nihena efatra isan-taona ary nahazo ny loko mampiavaka ny dite maina, izay efa zatra antsika.
Inona no mampitovy ny dite maitso amin'ny mainty?
Ao amin'ny famokarana dite maitso, ny dingana oxidation dia mivoaka amin'ny tsingerin'ny. Dikan'ny dite, aorian'ny dingana kintanina, mankanesa avy hatrany amin'ny fanamasinana. Ary maina izy ireo tsy toy ny dite mainty, fa amin'ny etona, na amin'ny alàlan'ny analogue an'ny "fandroana".
Ny fandefasana ravina iray amin'ny habe iray hafa avy amin'ny haben'ny iray hafa dia ny dingana farany amin'ny famokarana dite, izay ny ravina dite dia mandalo amin'ny fitsangatsanganana misy habe samihafa. Noho izany, ny dite dia atsangana amin'ny siansa. Amin'ity dingana ity, na inona na inona karazany, ny tsiro ny dite dia mitovy!
Fa ny haben'ny sombintsombiny (grade) dite dia zava-dehibe amin'ny dingana mifangaro ny vokatra farany miaraka amin'ny karazana tsiro rehetra, ny tsiro ary ny singa hafa misy fiantraikany amin'ny tsiro farany.
Mamita ny tsingerin'ny famokarana dite lehibe.
Mba hahazoana ny dite mainty 1 kg dia mila mampiasa 4,5 kg ny ravina dite vao
Zavamaniry dite ny tena hazo. Tsotra fotsiny, manapaka tsy tapaka zana-kazo tanora, tsy avela hitombo izy
Ho an'ny andro fiasana (12 ora), ny vehivavy iray dia manangona ravina dite 7 kg
Ny voninkazo dite dia manitra toy ny bergamot. Fa ny ravina dite tsy misy fofona.
Toy izany ny endriky ny voninkazo tiana
Mba tsy handoavana be loatra ny dite, tandremo ny fonosana. Amin'ny alàlan'ny lalàna, izay vokatra rehetra dia tsy maintsy manana ny sandan'ny vidiny.
"Liona miaraka amin'ny sabatra." Ity marika natao pirinty teo amin'ny fonosana ity dia tokony hiantoka fa ny 100 dite dia maniry, novokarina ary namboarina tao Sri Lanka. Io marika io dia marika iray amin'ny kalitaon'ny Filan-kevitry ny Tea Lanka. Raha ny tokony ho izy dia tsy maintsy manana làlana 17 ny liona.
Sri Lanka Tea Mark Mark (Ceylon Tea)
Ao amin'ny trano fisotroana kafe iray any Sri Lanka, dia saika tsy ho afaka mahita dite avo lenta. Ny kitapo dite dia mahazatra.
Ny Sri Lankans dia tia ny dite manana kilasy ary rehefa manamboatra ronono condens ho azy ireo. 🙂
Sarotra Tehaka tsara indrindra any Sri Lanka
Ao amin'ity sakana ity dia manondro, raha ny hevitray, ireo marika tiana tsara indrindra azonao hividianana ao Sri Lanka tsy matahotra tahotra.
Ao anatin'io lahatsoratra io dia misy marika arakaraka ny isa manokana anay:
Mackwoods. Iray amin'ireo marika tsara indrindra any Sri Lanka
Ny dite Macwoods dia maniry, mamokatra ary fonosana ao amin'ny faritr'i Nuwara Eliya. Ny kalitao sy ny maha-voajanahary dia azo antoka amin'ny alàlan'ny marika, ary koa marika fambara avy amin'ny filankevitry ny Tea Lanka.
Tsara homarihina fa ity mpanamboatra ity dia mpamatsy ofisialy ny dite amin'ny lapan'ny mpanjaka Grande-Bretagne. Ary hitanareo, dia ny tenany aza efa famantarana ny kalitao.
Azonao atao ny mividy ao amin'ny orinasa any Nuwara Eliya, ary eo amin'ny seranam-piaramanidina any Sri Lanka, ary amin'ireo fivarotana lehibe ao amin'ny nosy.
Dite kalitao avo lenta amin'ny iray amin'ireo mpamatsy sakafo be indrindra indrindra amin'ny Basilur Tea Exports (Pvt) Ltd.
Izy no, avy amin'ny teas kilasy voalohany, matetika hita eo amin'ny talantalana ivelan'i Sri Lanka. Amin'ny vanim-potoana anoratana izao, ny dite Basilur dia atondrana any amin'ny firenena 67.
Izy io dia aseho amin'ny kalitao tsy mety mitongilana ary paleta iray midadasika. Tea-exported by ity orinasa ity dia be avo indrindra. Voangona any amin'ny faritra isan-karazany any Sri Lanka. Ny orinasa famokarana dia any amin'ny tanànan'i Colombo (Sri Lanka)
Na dia betsaka aza ny tsiro hafa, dia ny akora voajanahary ihany no ampiasainy.
Mlesna Tea Company (Ceylon LTD) dia orinasa mpanamboatra dite any Sri Lanka hatramin'ny 1983. Nahazo fifanajana sy fankatoavana tao amin'ny firenena 60 mahery ny orinasa. Nandritra ny tantarany, nahazo medaly sy loka marobe tamin'ny fampiratiana iraisam-pirenena ara-pinoana izy ireo.
Izy io dia ahitana karazana tsiro sy hanitra (200 eo ho eo).
Tea izay ampiasaina amin'ny famokarana dia namboarina tamin'ny fambolena any aminay manokana any amin'ireo faritra dite any Sri Lanka. Ny orinasa Mlesna dia mipetraka any Nuwara Eliya.
Tea Tea lafo fa matsiro any Sri Lanka + Prices
Nandritra ny tany Sri Lanka dia nanoro hevitra mafy ianao fa handinika tsara ny dite izay tsy amidy any amin'ny fivarotana souvenir na any amin'ny efitrano fitehirizan'ireo tranobisy dite, fa ny iray kosa dia hita any amin'ny fivarotana lehibe rehetra manerana ny Nosy!
Io dite io dia miloko marevaka, tsy kitapo loatra. Izy io dia ny tiana am-ponja ny tiana hafa rehetra, ary omena anao any amin'ny kafe sy trano fisakafoanana any Sri Lanka. Ary ity dite ity ianao dia atolotra ho an'ny sakafo maraina ao amin'ny hotely.
Ity dite ity dia manana tsiro mamirapiratra, manankarena ary manitra matitra mahafinaritra. Ho an'ny famokarana dia ampiasaina matetika ny dite maniry amin'ny voly avao-nosy. Izy io dia mampiseho hery tsy manam-paharoa.
Ny karazana isan-karazany amin'ireto teas ireto dia Broken Orange Pekoe Fannings.
Format - faribolana matevina.
Ireo teaka ireo dia tsy manana additives sy tsiro hafa!
Ity ambany ity dia asehontsika ny marika mahazatra amin'ny dite toy izany, izay azonao mora foana raha maniry ao amin'ny fivarotana manerana an'i Sri Lanka ianao.
Mason'ireo dite tsy lafo, matanjaka any Sri Lanka
Watawala Fokontany Watawala
Vidiny ho an'ny 100g - 145 rupee
Voamarika miaraka amin'ny marika kalitaon'ny filankevitry ny Tea Lanka
Tea Factory Maliban
Vidiny ho an'ny 100g - 135 rupee
Dite mahaliana avy amin'ny orinasa Lipton tsotsotra (ho an'ny tenany)
Dite mahaliana avy amin'ny orinasa Lipton manetry tena
Vidiny ho an'ny 100g - 110 rupee
Na dia eo aza ny vidiny, tena tsara ny dite
Zenra Tea avy amin'ny orinasa Danduwangala
Vidiny ho an'ny 100g - 140 rupee
Kotagala Tea Factory
Vidiny ho an'ny 100g - 120 rupee
Dite avy amin'ny Fokontany Janawasama
Tea avy amin'ny marika Sri Lanka malaza Zesta
Raha manana zavatra hanampy ianao na manana fanontaniana dia ampiasao ny endrika eto ambany:
Tsara ny tehina teo.
Na ny dite mora indrindra indrindra aza ao amin'ny kiosk Trincomalee dia tsy takatry ny saina noho ny mahatratra ny fivarotana any Rosia!
Ary mahaliana ny endrik'ireny teas izay misotro zava-pisotro eny an-toerana. Tsy ravina, fa toy ny latabatra. Mihevitra aho fa amin'ity tahirin-kevitra ity dia voatahiry tsara kokoa, ary somary feno kokoa noho ny tahony mitovy amin'ilay takelaka.
Tadidiko hoe ahoana ny tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray tao Kandy, nangataka dite Sri Lankan tsara avy teny an-dalana izy ireo, ary nitondra kitapo tao anaty kitapo izahay.
Misaotra ny mpanoratra ny fampahalalana!
Tsy ampoizina fa ny tontolo iainana sy ny toe-piainana mitombo dia misy fiantraikany amin'ny tsiron'ny dite!
Mandeha any Sri Lanka tsy ho ela.
Afaka manome soso-kevitra vitsivitsy momba ny marika dite hividianana ve ianao?
Misaotra anao manintona!
Raha ny momba ireo marika, manomana fotsiny ny fitaovana isika.
Rehefa afaka roa andro dia hiseho amin'ity pejy ity izany.
Hitako ny fanavaozana ny mombamomba ilay marika nampanantenaina. Misaotra!
Tamin'ny lafiny rehetra, nanandrana an'i Bazilur - mahafinaritra ny dite. Ny tsara indrindra tamin'izay nihaona tamina fivarotantsika.
Ankehitriny hataoko andramana any Sri Lanka;). Na dia mahamenatra aza fa vokarina any Colombo, ary tsy eo amin'ny toerana misy ireo fambolena. Eny, ary be dia be ny tsiro sy ny hanitra. tsy miteny amy ny ankasitrahany koa.
Mila manandrana ianao sy Macwood, satria ny lohan'ny fanjakany aza no tadiavina).
Misaotra ny valiny 🙂
Ekeko ny fiahianao, ary mieritreritra ihany koa aho fa ny lehibe kokoa, ny mety ho ambany kokoa ny kalitao.
Na dia tsy tranga mihitsy aza. Ny zava-dehibe dia ny hoe ireo akora mihitsy no tokony hambara ho kalitao avo lenta.
Raha mety dia miandry ny famerenanao momba ny teas any Sri Lanka izahay.
Manaova fitsangatsanganana mahafinaritra!
Te hanampy aho ny vaovao fa misy karazana orinasa dite roa any Sri Lanka.
Ny karazana iray dia ireo izay miteraka dite mampiasa mekanisma maoderina. Manafaingana sy hampihena ny vidin'ny famokarana izany. Amin'ny maha-fitsipika azy, dia tsy vokatra farany ny famoahana orinasa toy izany, fa ny akora mpangataka dite ihany, izay feno anaty kitapo lehibe ary aondrana any amin'ny firenena samy hafa ho an'ny dingana famokarana farany any amin'ireo orinasa mpanao dite eran-tany. Mazava ho azy fa ambany ny kalitaon'io dite io.
Karazan-trano iray hafa dia ireo orinasa miasa amin'ny fomba nentim-paharazana. Mampiasa am-pahavitrihana asa. Eto ny dite avy aminy dia ny fisian-dite avo lenta, izay tena malaza any Sri Lanka. Ary ireo ihany no manam-pahefana manana marika manana marika làlana (mariky ny liona manana sabatra), izay voalazanao ao anaty lahatsoratra io.
Ny marika izay nolazainao tao anaty lahatsoratra dia avy amin'ny sokajy faharoa.
Misaotra ho an'ny fanampiny.
Ao Bali, ny fisotroana kafe tena mandroso. Ary mahafinaritra izy ao, eny fa na dia mora vidy indrindra. Tena mafy noho ny zavatra rehetra efa nisedraiko taloha.
Any Sri Lanka, dite ity. Ary eto dia tena tsara lavitra noho izay aondrana any Rosia.
Izaho, satria mpankafy an'io sy fisotroana, dia nanisa azy ireo 10 tamin'ny 10 aho.
Mbola toerana tsara ity Azia 🙂 ity
Mpankafy dite mafana be aho
raha any Lanka dia manoro hevitra hanandrana Macwood aho. Tea dia baomba fotsiny ary ny tsara indrindra teo amin'ireo rehetra nanandramako tany!
Nandeha nanao vakansy tany Sri Lanka ilay lehilahy. Fantatro izao izay tokony hibaikoana! Maro, betsaka TEA !!!!!
Ity misy dite mora sy matsiro indrindra any Sri Lanka! 🙂
Misaotra amin'ny fanehoan-kevitrao. Izy dia nanentana anay ho eo an-tsaina, vokatr'izany hoe block iray misy fampahalalana hafa no teraka tamin'ity pejy ity. Nanoratra momba ny dite izay naterakao izahay, ary tehina mitovy aminy. Ary koa ny lanjany sy ny sarin'izy ireo amin'izao fotoana izao.
Tena tsara ireo teida ireo.
eny eny! ) Tena tsara ity dite ity. Amidy any amin'ny fivarotana na oviana na oviana izy io na amina café. Mahery, manankarena, manitra! :). Ny vidiny dia mihoatra ny tsy mivadika. Mampiasa an'io ny ankamaroany. Mety tsy avy amin'ny kilasy ambony, fa tsy dia matsiro.
Ary koa .. manoro hevitra hampiasaina!
Nividy dite Zesta tao Sri Lanka aho. Earl Grey miaraka amin'i Bergamot.
Marihina fa miditra amin'ny ampahany BOPF izy. Ary ny tsirony dia mahagaga ihany. Mamirapiratra, saturated. Aorian'io, ny dite ravina avy amin'ny basil dia toa feno rano.
Tsy adala ny eo an-toerana, aleony BOPF tanteraka. Io dite ity dia tena misy tsiro matanjaka.
Na inona na inona fomba fijery tsy azo lazaina sy “mangatsiatsiaka” dia mbola tsara kokoa noho ny tsiroko izy.
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 37